Faah Faahin Socdaalkii Ra’isul wasaare Gaas ee magaalada Qardho (SAWIRO) – SBC
Faah Faahin Socdaalkii Ra’isul wasaare Gaas ee magaalada Qardho (SAWIRO)
Posted by Webmaster on Diseenbar 27, 2011 Comments
Waxaa maantay gelinkii hore si weyn loogu soo dhaweyay wafdi balaaran uu Hogaaminayo ra’isul wasaaraha dowladda KMG ah ee Soomaaliya Mudane. Cabdiweli Gaas magaaladda Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar.
Magaaladda meel u jirta illa iyo 5 KM ayaa ayaa waxaa kaga hortay Ardayda Jaamacadaha iyo iskuuladda Qardho,iyo weliba dadweyne fara badan, dadka ayaa ku dhawaaqayey hadalo ay ka mid ahaayeen soo dhoowoow ra’isul wasaare, taasi oo diyaargarow xoog leh ay u galeen masuulyiinta dowladda hoose.
Ra’isul wasaaraha ayaa wafdigii waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah golihiisa wasiiradda iyo weliba Masuulyiin ka tirsan Puntland oo uu ka mid ahaa Madaxweyne Faroole, iyo qaar ka mid ah golaha wasiiradda xukumadda Faroole.
Socod dheer oo ay ku soo mareen gudaha magaaladda wafdiga ra’isul wasaaraha ayaa ugu dambeyntii waxaa quraac loogu sameeyay Hotelka Guffurre ee Magaaladda Qardho, ka dib waxaa loo soo galbiyey dhanka iyo xarunta dowladda Hoose.
Gudoomiyaha Golaha degaanka ahna duqa Magaaladda Qardho mudane. Maxamed Siciid Ciise ayaa ku tilmaamay booqshadda wafdiga ee Qardho in ay tahay mid taariikhi ah, isla markaana socdaalkooda uu wax weyn ka tari doona bulshadda degaanka.
Hadalo ay ka jeediyey ra’isul wasaaraha iyo Madaxweyne Faroole ayaa waxa ay in badan kaga hadleen sida ay ugu faraxsan yihiin in wafdiga ra’isul wasaaraha loogu soo dhaweeyay degmadda Qardho.
Madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Farole ayaa waxa uu hadal dheer uu jeediyey ku sheegay in ay faraxad u tahay sida loo soo dhaweyay Madaxda Qaranka iyo weliba sida Qardho ay amaankeedu u yahay mid leysku haleen karo, isaga oo sheegay in mar mar ay dilal ka dhacaan aano qabiil ku saleysan taasina loo baahan yahay in si wada jir ah looga hortago.
Ra’isul wasaare Gaas ayaa waxaa uu mahadcelin gaar ah u jeediyey shacabka degmadda Qardho iyo guud ahaan Puntland, isaga oo ku amaanay Qardho in ay tahay Magaalado taariikh ku leh waxbarshadda Soomaaliya.
” runtii Qardho waa magaalo taariikh ku leh waxbarshadda, waxaanu balan qaadeynaa in aanu gacan ka geysano sidii waxbarshadda degmadda sare loogu sii qaadi lahaa, sidoo kalena Jaamacadda Bariga Soomaaliya ee Qardho dhankeena gacan ka geysaneynaa, dhismaheeda iyo weliba sidii taageero loo siin lahaa” ayuu yiri ra’isul wasaare Gaas.
Ra’isul wasaaraha ayaa waxaa soo dhaweyntiisa ay noqoneysaa markii ugu horeysay oo uu soo gaaro Qardho tan iyo intii loo Magacaabay xilkaas, sidoo kalena waxa ay muujineysaa sida dadka reer Puntland ay u jecel yihiin midnmidda Soomaaliya.
abdalla baabraqiis says:
Diseenbar 27, 2011 at 7:18 pm
walaal waa arin lagu farxo boqasha uu madaxweynahena ku tagay bosaso iyo qardho iyo raysal wasarahena qaranka wana alle mahadiis inay sinabad iyo farxad iyo kal gacayl ku jirto logu soo dhaweyo puntland
said abdi hassan says:
Diseenbar 28, 2011 at 12:24 am
aad baad umahadsantihiin dadaalka aad kujirtaan iyo sawirada aa soo gudbinasaan waa dareen aad uwanaagsan,xowli cusub. alaa mahadaale,ee ku booriya,dadaalka.thanks,
muuse maxamd jaansaar says:
Diseenbar 28, 2011 at 1:36 pm
waxan aad ugu faraxsanahay soo gaarista raisal wasaare c/wali maxamad cali gaas iyo sida aad ka uquruxda badan ay u soo dhaweeyen shacabka reer qardho iyo uu horeeyo duqada dagmada maxamad siciid hogaamo la roor waa wax farxad noo ah shacabka qurbaha jogta iyo ku dalka jooga waa horumar waxqabadka u shegay wan ka sugaynaa hadu alle yiraahdo
maxamed c/raxmaan adan gacnadheere says:
Diseenbar 28, 2011 at 7:21 pm
walahi wadnuu soo iibsaday afwaliinje mise gaas baa khasbay faroole waliga bosaso galgacyo ma imaan wuukabaqaa lacagta iiga soo rara waxa looga noolyahay ma oga waxa ka jira lacagta iiga soo rara diyaaradaha iiga garoowe hada wuxuu soowada bada sooleexsha garoowe keena bada waa yaxar ciise riyoole waa gun ogada c/qaadir gacmay waaa tuug ogaada faroole c/qaadir gacmay waa tuugo
Diseenbar 28, 2011 at 11:16 pm
guul guul reer puntland all waxaan idiin rajaynayaa guul guul inaad ku wartaan reer qardho waad ku mahadsantihiin saad u soo dhowayseen waftiga ayuu horkacayo raysul wasare gaas iyo dr abdirahmaan faroole